Vese Vakapa Vamwe, Vamwe Vakapa Zvese. Ndatenda. | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 11, 2008 China, November 13, 2008 Douglas Karr
Chiziviso neMutungamiriri weUnited States of America
PaZuva reVeterans, tinopa rukudzo kubasa nekuzvipira kwevarume nevakadzi avo mukudzivirira rusununguko rwedu vakapfeka yunifomu yeUnited States neushingi.
Kubva kuminda nemasango eEurope yakaparadzwa nehondo kuenda kumasango eSoutheast Asia, kubva kumarenje eIraq kusvika kumakomo eAfghanistan, vakashinga vemunyika vakadzivirira zvinangwa zveNyika yedu, kununura mamirioni kubva pahudzvinyiriri, uye vakabatsira kuparadzira rusununguko kupote nyika. MaAmerican veterans vakapindura kushevedzera pavakakumbirwa kuchengetedza Nyika yedu kubva kune vamwe vevane utsinye uye vane utsinye vane utsinye, magandanga, nemauto nyika yati yamboziva. Vakamira vakareba pakatarisana nenjodzi huru uye zvakaita kuti Rudzi rwedu rive simba gurusa munhoroondo yevanhu. Nhengo dzeMasoja, Navy, Mauto Emuchadenga, Marines, uye Coast Guard vakapindura kushevedza kukuru kuti vashumire uye vakabatsira kuchengetedza America nguva dzese.
Nyika yedu inogara ichikweretesa varwi vedu vehondo nekuda kwekushinga kwavo kwakanyarara uye nebasa rakanaka. Isu tinorangarirawo nekukudza avo vakaisa hupenyu hwavo mukudzivirira kwerusununguko. Ava varume nevakadzi vakashinga vakaita kuzvipira kukuru kwekutibatsira. PaZuva reVeterans, tinorangarira aya magamba ehumhare hwavo, kuvimbika kwavo, uye kuzvipira kwavo. Kuzvipira kwavo kwekuzvipira kunoramba kuchikurudzira isu nhasi apo isu tinoshanda kusimudzira runyararo uye nekuwedzera rusununguko pasirese.
Nekuremekedza uye nekucherechedza mipiro yakaitwa nenhengo dzedu dzebasa kukonzeresa runyararo nerusununguko pasirese, Congress yakapa (5 USC 6103 (a)) kuti Mbudzi 11 yegore rega rega ichaiswa parutivi semutemo zororo reruzhinji kukudza varwi veAmerica.
IZVOZVI ZVAKAITIKA, INI, GEORGE W. BUSH, Mutungamiri weUnited States of America, ndiri kuzivisa musi waNovember 11, 2008, seZuva reVeterans uye ndinokurudzira vese vekuAmerica kuti vacherechedze Mbudzi 9 kusvika Mbudzi 15, 2008, seNational Veterans Awareness Week. Ndinokurudzira vese vekuAmerican kuti vaone kushinga uye kuzvipira kwevakarwa vedu kuburikidza nemhemberero neminamato. Ndinoshevedza Federal, State, uye vakuru vemunharaunda kuti varatidze mureza weUnited States uye vatsigire uye vatore chikamu mumabasa ekutsigira nyika munharaunda mavo. Ini ndinokoka masangano eruzhinji nehama, nzvimbo dzekunamatira, zvikoro, mabhizinesi, masangano evashandi, uye vezvenhau kuti vatsigire kuchengetwa kwenyika nezviyeuchidzo nezvirongwa.
MUZVAPUPU ZVINO, ndakaisa ruoko rwangu pamusi uyu wemakumi matatu nerimwe zuva raGumiguru, mugore raIshe wedu zviuru zviviri nemasere, uye neRusununguko rweUnited States of America mazana maviri nemakumi matatu nematatu.
Tags: redhiyoslideshare linksChifuramabwe SEO
Ko Tekinoroji Inogonesa Kana Kuremadza Kushambadzira Kwako?